မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သည်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နှင့်သဘောတူညီမှုရရှိပါသလား။ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အားကစားများ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သည်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နှင့်သဘောတူညီမှုရရှိပါသလား။
အရေးအပါဆုံးဥရောပလိဂ်လွှဲပြောင်းပြတင်းပေါက်တံခါးပိတ်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကဇန်နဝါရီလသည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်နောက်ကျဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ ကလစ်နှိပ်ပါ ဒီမှာနောက်ဆုံးပေါ်လွှဲပြောင်းကြည့်ရှုရန် အောက်တွင်နောက်ဆုံးပေါ်အတင်းအဖျင်းများရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရန်စောင့်ရှောက်လော့။
10 2020 အတွက်ထိပ်တန်းအခမဲ့အေးဂျင့် | ဥရောပလွှဲပြောင်း၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Top Story - မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သည်မန်ယူနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်နီးစပ်ပြီ
Tuttosport အစီရင်ခံစာများ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သည်ဂျူဗင်တပ်စ်နှင့်စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခဲ့သည့်ခရစ္စတီယာနိုတိုက်စစ်မှူးကိုခေါ်ယူရန်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည် မာရီယို Mandzukic .
Mandnukic သည်အသက် 33 သည်လတ်တလောတွင် Old Trafford သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်နေပြီးနွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကာလအတွင်းနီးပါးပြောင်းရွေ့ခဲ့သည်။ သို့သော်ယူနိုက်တက်သည်ဇန်န ၀ ါရီလတွင်၎င်း၏အာရုံကိုလှည့်ပြီးဂိုးအပေါ်ဆန့်ကျင်နေသည့်ပုံစံကိုမကြာသေးမီကတွန်းအားပေးခဲ့သည်။
အီတလီအရောင်းအ ၀ ယ်တွင်သိသာထင်ရှားသည့်တိုးတက်မှုများရှိခဲ့ပြီး Mandzukic ကိုယုံကြည်သည်ဟုဆိုပါသည်။ ကာတာမှ Al-Rayyan ထံမှနှစ်စဉ်7ပေါင်သန်းချီသောလေလံကိုဥရောပအကောင်းဆုံးလိဂ်များတွင်ဆက်နေရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ သဘောတူညီချက်ပြီးဆုံးပါက 1er January နှင့်ယူနိုက်တက်အနေဖြင့်တိုတောင်းသော်လည်းအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိလိမ့်မည်ကိုအတည်ပြုပါလိမ့်မည်။
22.55 TSB: ကြာသပတေးနေ့ရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်စာစောင်ကိုပိတ်သွားမှာပါ။ Transfer မှ Talk ကိုအီတလီမှသတင်းများ။ မှ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Theo ဟာနန်ဒက်ဇ်သည်အေစီမီလန်တွင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည် ရီကာဒို Rodriguez Borussia Dortmund၊ Schalke နှင့် Everton တို့သည် 27 နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်စိတ်ဝင်စားနေကြသည်။
21.38 TSB: SB Nation ရဲ့ Hudson မြစ်အပြာရောင် နယူးယောက်စီးတီး FC သည် 21e FCSB အားသီးခြားလက်မှတ်ထိုးရန်ကြိုးစားနေသည်ဟုရိုမေးနီးယားသတင်းစာဆရာ Emanuel Rosu မှဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုစုဆောင်းခဲ့သည် Florinel Coman ၎င်းကို "Mbappe" ဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပြီးချယ်လ်ဆီး၊ ဘင်ဖီကာနှင့်အားကစားအသင်းများ၏အကျိုးစီးပွားများကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
20.21 BST: Feyenoord Orkun Kokcu Eredivisie ရဲ့အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ စာပို့ သတင်းများအရအာဆင်နယ်အသင်း၏စိတ်ဝင်စားမှုအရဒတ်ခ်ျကလပ်သည် 18 သက်တမ်းနှစ်ပေါင်း 20 ပေါင်သန်းချီ။ ကစားရန်စိတ်အားထက်သန်နေသည် 19659008] 19.04 ET: avec သောမတ်စ် Partey Atletico Madrid အသင်းကိုစတင်ကစားပြီးနောက်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Rojiblancos သူ၏ကန်ထရိုက်စာချုပ်ကိုယူရိုသန်း (50) ၏လျှော့ချရေးဝါကျအတွက်ဂါနာနိုင်ငံမှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုကိုကြောက်ရွံ့နေပြီး၊ ရည်မှန်းချက် ကလပ်သည် 26 ဖြန့်ချိသည့်အပိုဒ်ကိုနှစ်ဆတိုးသည့်သဘောတူညီမှုအသစ်တစ်ခုနှင့်နီးကပ်လာပြီဖြစ်ကြောင်းရေးသားခဲ့သည်။
17.47 TSB: အင်တာမီလန်အသင်းသည်ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်း၏ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်အတွက်ဇန်န ၀ ါရီလတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ပြင်ဆင်နေသည် သောမတ်စ် Muller အတိုင်း ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ နှင့်သုံးပါလိမ့်မယ် အိုင်ဗင် Perisic ပစ်မှတ်အဖြစ်။ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းသည်ပေါင်စတာလင်သန်း (၂၀၀၀) ဖြင့်ဝယ်ယူရန်ကြိုးပမ်းနေပြီးဘရာဇီးလ်တွင်အငှားဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင်စတာလင်သန်း (၅၀) ဖြင့်ခေါ်ယူရန်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည်။
16.30 TSB: Man United မှာအကြီးမားဆုံးပြtheနာကဘာလဲဆိုတာသင်သိချင်ရင်၊ သိသင့်တဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောခဲ့တယ်။
Edwin van der Sar သည်ယခင် ESPN FC နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည့်ကလပ်ဟောင်း Man Current Situation United မှသီးသန့်ပြောဆိုခဲ့သည်။
15.31 TSB: မန်ယူအသင်းသည် Benfica နောက်ခံလူကိုအလွန်နှစ်သက်ကြောင်းယခင်ကပြောကြားခဲ့သည် ရုဗင် Dias ဒါပေမဲ့အခုသူတို့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိတယ်။
အဆိုပါကြေးမုံကပြောပါတယ် မန်ချက်စတာစီးတီးသည် 23 နှစ်အကြာ၌လည်းရှိနေပြီးကာကွယ်ရေးအကျပ်အတည်း၏အလယ်တွင်ရှိနေစဉ်တွင် Wolverhampton Wanderers တွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည်။
14.50 TSB: Rostov ကွင်းလယ်လူမန်ယူပရိသတ်များအတွက်အနည်းငယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည် Mathias Normann အရသိရသည်ရေဒါပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် ရည်မှန်းချက် .
22 ကွင်းလယ်လူနှစ်များသည်စျေးနှုန်းချိုသာသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသူသည်နော်ဝေးအပြောင်းအလဲဖြစ်လာသည်။ သူသည် 2017 နှင့် 2018 ရှိ Molde တွင်ကစားစဉ်ကသူသည် Ole Gunnar Solskjaer နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိပြီးဘရီတန်၌သူ၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တွင်စိတ်ပျက်စရာစာလုံးပေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဘာကြောင့်၎င်း၏စျေးနှုန်းကိုသာ 20 သန်းသည်။
13.43 BST မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် လူငယ်တို့။ ဗြိတိသျှကစားသမား ... မင်းဇာတ်လမ်းကိုသိလား ကောင်းပြီ၊ ဒါက Leicester နှစ်လုံးထက်ပိုပြီးစကားပြောနိုင်တယ် ဂျိမ်းစ်ကထုတ်တဲ့ Maddison et ဘင် Chilwell ရေဒါပေါ်မှာပါ အဆိုပါစုံတွဲသည် 130 ပေါင်သန်းကုန်ကျသည်။
သူက ... .. ကနေဖြစ်ပါတယ် နေမင်း .
13.07 HST : က Le ချီကာဂိုမီးသတ်လက်မှတ်ထိုး ယခင် Real Madrid နှင့် Valencia ကွင်းလယ်လူ Alvaro Medran ။
အခမဲ့အေးဂျင့်သည် Target Allocation Money (TAM) ၏အကူအညီဖြင့်နှစ်နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ 2021 နှင့် 2022 သည်။ Medran သည်သူ၏ P-2020 ဗီဇာနှင့်နိုင်ငံတကာလွှဲပြောင်းလက်မှတ်ကိုလက်ခံရရှိသည်အထိဇန်နဝါရီလ 1 တွင်မီးသတ်သမားများစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းမည်။
12.16 BST - ဟိုဆေးမော်ရင်ဟို လစ်လပ်ဒါရိုက်တာတစ် ဦး အရင်းအမြစ်၏အခန်းကဏ္aboutကိုအကြောင်းကို Lyon နှင့်အတူစကားပြောဖို့အခွင့်အလမ်းလှည့် ESPN ကိုအပ်နှင်းပြီးမှ သူကကလပ်ကြီးတစ်ခုမှာစီမံကိန်းတစ်ခုရှာနေတာပါ။
ပေါ်တူဂီမန်နေဂျာသည်သူသေဆုံးပြီးကတည်းကအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေသည်။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဒီဇင်ဘာလမှာ 2018 အသင်းကထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပြီးရီးရဲလ်မက်ဒရစ်မှာအဝေးကွင်းမှာကစားရမယ့်ပွဲဖြစ်တယ် Zinedine Zidane [1 9459005] သည်ပြီးခဲ့သည့်ရာသီနှောင်းပိုင်းတွင်ပြန်လာသည်
လိုင်ယွန်ထုတ်ပယ်ခံရ Sylvinho Saint-Etienne ကိုဆန့်ကျင်။ 1-0 ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက်တစ်ရက်တနင်္လာနေ့တွင်ဂိမ်းကိုးခုတွင်၎င်းတို့၏စတုတ္ထမြောက်ရှုံးနိမ့်မှုဖြစ်သည်။
11.45 HST: ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်၏ဥက္က.္ဌ ဌဖလော်တီနိုဖာရ ခရစ်ယာန် Eriksen အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်စီစဉ် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းသည်ဇန်န ၀ ါရီလတွင်စပါးအသင်းသို့ပြောင်းရွှေ့လိုသော်လည်းမန်ယူအသင်းမှာမူမန်ယူအသင်း၏ ဦး စားပေးအဆင့်တွင်ရှိနေသည် ရှင်ပေါလု Pogba ESPN FC သတင်းရင်းမြစ်အရသိရသည် .
Pidba ကိုသူ၏ဇီဒန်ကလူသိရှင်ကြားကြေငြာခဲ့သည်။ သို့သော်မန်ယူသည်ယူနိုက်တက်၏အကဲဖြတ်ချက်နှင့်အညီမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ စပါးအသင်းသည်ယခုနှစ်နွေရာသီတွင်ထွက်ခွာသွားလိမ့်မည်ဟုအရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့သည့်အဲရစ်ဆင်သည်သူ၏စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှုနောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်သည်။
ကွင်းလယ်တွင်ဒဏ်ရာရမှုများကယခုရာသီတွင်မက်ဒရစ်ကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။ ဇန်နဝါရီလအတွင်းသဘောတူညီချက်တံဆိပ်ခတ်။ သို့သော် Zidane သည် Pogba ကိုလက်မှတ်ထိုးရန်ဆုံးဖြတ်ထားဆဲဖြစ်သည်။
10h59 TSB: လီဗာပူးလ်နည်းပြ Jurgen Klopp သည် 2018 ရှိ Borussia Dortmund သို့ပြန်လာရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ အတိုင်း သူသည်စီအီးအို Hans-Joachim Watzke ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိအရလေ့ကျင့်ခဲ့သည်
ဒီ 52 သက်တမ်းရှိသူဟာ Dundmund မှာ ၇ နှစ်တာကာလအတွင်း Bundesliga ဆု ၂ ဆုနဲ့တစ်နှစ်တာအမျိုးသားအဆင့်ဆုရရှိခဲ့ပြီး 2013 ကလပ်ကိုလည်း ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ ချန်ပီယံလိဂ်၏ဗိုလ်လုပွဲ။ သို့သော် 2015 သို့ထွက်ခွာပြီးလေးနှစ်အကြာ Klopp သည် Westfalenstadion ကိုချိတ်ဆွဲနေဆဲဖြစ်သည်။
အတ္ထုပ္ပတ္တိတွင်ကလော့ပ်ကိုကိုးကားထားသည် -“ အာကီ [Watzke] ကတစ်နေ့ငါ့ကိုဖုန်းဆက်ပြီး 'ဂျူဂျင်၊ မင်းပြန်လာရမယ်! ငါရယ်ပြီးသူကနောက်နေတာလို့ထင်ခဲ့တယ် မင်းမိုက်မဲလား မင်းမူးနေလား သင်ဘယ်လိုထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကူးရှိနိုင်မည်နည်း ကျွန်တော်ဟာလီဗာပူးလ်မှာနှစ်အနည်းငယ်စာချုပ်နဲ့ချုပ်ဆိုနေပါတယ်။
"ကလပ်အသင်းကကျွန်တော့်ကိုတကယ်လိုအပ်လာရင်ကယ်တင်ရှင်အနေနဲ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်မလုပ်သင့်တာလဲ။ ငါရွေးစရာတောင်ရှိတာအရမ်းကောင်းတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်ထိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်မထင်ပါဘူး။ "
10.36 BST ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကို သောမတ်စ် Muller သူ၏အသင်းဖော်ဖြစ်သူမှာ "စိတ်ကူး။ ပင်ခက်ခဲလိမ့်မည် ယောရှုသည် Kimmich ကပြောသည်
ယခုနှစ်ရာသီတွင်ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်း၏ကစားသမားအဖြစ်တာဝန်ယူခြင်းနှင့်အတူ Muller သည် 30 နှစ်များအတွက်စိတ်ကျေနပ်မှုမရရှိခဲ့ပါ ယခုအပတ်အစောပိုင်းကပြောကြားခဲ့သည် အဲဒီမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာနေဖို့ "အရမ်းရည်မှန်းချက်ကြီး" "ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုတွင်ပထမဆုံးအနေဖြင့်သူသည် Allianz Arena မှထွက်ခွာသွားပုံရသည်။
"သောမတ်စ်ဟာသူ့အခြေအနေကိုမနှစ်သက်ဘူးဆိုတာရှင်းပါတယ်။ သူကစားချင်တယ်။ ဂျာမနီကအာဂျင်တီးနားကိုဆန့်ကျင်တဲ့2ပွဲမှာ2ပွဲမှာအနိုင်ရပြီးနောက်သူကအစားထိုးခုံတန်းမှထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသူကအရမ်းကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လိမ့်မယ်လို့ခင်ဗျားပြောဖို့လိုပါတယ်။ သူကခုံတန်းရှည်ပေါ်မှာငါးဖြောင့်ဂိမ်းပြီးနောက်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်မပါဘဲဘိုင်ယန်ကိုစိတ်ကူးကြည့်ဖို့ခက်ခဲ ၎င်းသည် Schweini ကဲ့သို့ကြီးမားသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ Bastian Schweinsteiger ] သို့မဟုတ်အတိတ်တွင် Philipp Lahm နှင့် ဒါဝိဒ်သည် Alaba ယခု။ "
ESPN FC မှ Gab Marcotti က“ ဘိုင်ယန်မြူးနစ် Thomas Muller သည်ဇန်နဝါရီလတွင်ကလပ်မှထွက်ခွာမည်မဟုတ်ကိုသုံးသပ်သည်။
09.56 TSB: Erling Haaland  သည် FC Salzburg တိုက်စစ်မှူးတစ်ယောက်မဟုတ်ဘဲအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ The Daily Mail ကအစီရင်ခံစာများ အာဆင်နယ်နှင့် Crystal Palace တို့သည်တောင်ကိုရီးယား၏မျှော်လင့်ချက်များကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေသည့်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်များတွင်ပါဝင်သည် Hwang Hee-Chan .
Xwang, 23, ယခုရာသီ 11 အတွက်ရည်မှန်းချက်ခုနစ်ခုရှိပါတယ်နှင့်သူ၏စာချုပ် 2021 အထိ။
09.14 ဟဗွေဲ: Pep Guardiola ကြိုက်တယ် ဖီးလ် Foden ။ သူကသူ့ကိုခေါ် အများဆုံးပါရမီကစားသမား ပါဝင်သည်ရာ - သူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည် Lionel Messi ယခုအခါ 'Pep's City: The of the Making' ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသောစာအုပ်တစ်အုပ်တွင် 'Foden ကိုမတော်တဆစာချုပ်အသစ်မပေးခဲ့ဘူး။ ၎င်းသည်မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုရောင်းချနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောကစားသမားဖြစ်သည် - တစ်ခုတည်းသော၊ 500 သန်းအတွက်ပင်မဟုတ်ပါ။
"ဖီးလ်ဘယ်တော့မှမသွားဘူး၊ ဖီးလ်ကစီးတီးပါ။ ဒီရာထူးအတွက်ဘယ်သူ့ကိုမှလက်မှတ်ထိုးမှာမဟုတ်ဘူး။ ရသောအခါ ဒေးဗစ်ဆေးလ်ဗား ငါတို့နွေရာသီမှာထွက်သွားကြလိမ့်မယ်ငါတို့နတ်သမီးအသစ်ဘယ်သူလဲဆိုတာအတိအကျသိတယ် "
08.30 နာရီ HN: Benfica ၏ဗဟိုကျော ရုဗင် Dias မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာ ဒါပေမယ့်ကလပ်ကဒီအချက်ကိုသိပြီး 26 ရဲ့စာချုပ်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်တဲ့စာချုပ်ကမ်းလှမ်းသင့်ပါတယ်။
၎င်းသည်ပေါ်တူဂီနိုင်ငံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသံလွှင့်ဌာန၏ထုတ်လွှင့်သည့်အပိုဒ်ကို 79 ပေါင်မီလီယံခန့်အထိရောက်ရှိသွားလိမ့်မည်။
Gareth Bale သည်ဇန်နဝါရီလတွင်ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်မှထွက်ခွာမည်လောဟု Shaka Hislop တွေးမိသည်။ 19659075] စက္ကူစကားပြော (Harry Kettle မှ)
Inter Milan ၏ပစ်မှတ်များထဲတွင် Rakitic နှင့် Matic
အင်တာမီလန်မီလန်သည်ဇန်နဝါရီလအပြောင်းအရွှေ့ ၀ င်းဒိုးသို့ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်တစ်ခုရောက်ရှိရန်စိတ်အားထက်သန်နေသည်။ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ .
အထူးသဖြင့် Serie A ခေါင်းစဉ်အတွက် Juventus ကိုအလေးအနက်ထားမယ်ဆိုရင် Inter ကနောက်ထပ်ကွင်းဆက်မှာနောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာလိုအပ်တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ အိုင်ဗင် Rakitic et နီမန် MATIC ကလပ်အသင်း၏အဓိကပစ်မှတ်နှစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင်လာဇီယာနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည် Sergej Milinkovic-Savic .
. Sandro Tonali ၎င်းသည်အုပ်စုတွင်ပါ ၀ င်သော်လည်း ၀ င်းဒိုးမဖွင့်မှီလအနည်းငယ်အလိုတွင်မန်နေဂျာအန်တိုနီယိုကွန်တီအတွက်ရွေ့လျားနေသောအရာများစွာရှိနေသည်။
မန်ချက်စတာစီးတီးသည် Ake ကိုစိတ်ဝင်စားနေသည်
ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံမန်ချက်စတာစီးတီးသည် Bournemouth ကြယ်ပွင့်ကိုလက်မှတ်ထိုးရန်စိတ်ဝင်စားသည် နာသန် Ake အားဖွငျ့ဖွစျသညျ ဇန်နဝါရီလအကူးအပြောင်းကာလအတွင်း, မန်ချက်စတာညနေခင်းသတင်း .
ပရီးမီးယားလိဂ်စတင်အစတွင်မြို့သည်ရုန်းကန်နေရပြီးသူတို့၏ခုခံကာကွယ်မှုပြproblemsနာများကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိမှုများစွာကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ သူတို့က Ake လိုကစားသမားကိုကလပ်ကိုဆွဲဆောင်မယ်ဆိုရင်လီဗာပူးလ်ရဲ့ပြိုင်ဘက်အသင်းကိုရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးမားမားရှိလိမ့်မယ်။
24 သက်တမ်းကြာကစားသမားသည်ချယ်လ်ဆီးအသင်းတွင်ခြောက်နှစ်ကြာကစားခဲ့ပြီးနောက် 2017 မှချယ်ရီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးငြင်းဆန်ခွင့်ရှိသော်လည်းအပြောင်းအရွှေ့ပိတ်ပင်မှုကိုခံနေရပြီးစီးတီးသည်ဤသဘောသဘာ ၀ ကိုပြောင်းရွှေ့ရန်စိတ်ဝင်စားပါကအလျင်အမြန်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။
- မော်ရင်ဟိုသည်Nရာမလိဂ်ဖြစ်သော 1 အသင်းနှင့်လိုင်ယွန်အသင်းကိုပြန်လာခွင့်ကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ RMC ကတင်ပြသည် ။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မန်နေဂျာဟောင်းကသူ၏ပထမဆုံးရည်မှန်းချက်မှာပရီးမီးယားလိဂ်သို့ပြန်လာရန်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဂျူဗင်တပ်စ်သည်လက်မှတ်ထိုးရန်ကြိုးပမ်းမှုကိုစိတ်ဝင်စားသည်။ ချယ်လ်ဆီး၏လက်ဝဲကျော အီမာဆန် Calciomercato ကအစီရင်ခံသည် ။ 25 ကစားသမားကိုအီတလီချန်ပီယံများ၏အဓိကပစ်မှတ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးဘယ်ဘက်တွင်၎င်းတို့၏စွမ်းရည်ကိုတည်ဆောက်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ ချယ်လ်ဆီးအနေဖြင့်သူမအဟောင်းကိုတားဆီးရန်စာချုပ်သက်တမ်းတိုးရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
ဤဆောင်းပါးတွင်ပထမဦးဆုံးပေါ် (အင်္ဂလိပ်လို) သည်ထင်ရှား http://espn.com/soccer/blog-transfer-talk/story/3961946/transfer-talk-manchester-united-reach-mandzukic-agreement
Sergino Dest သည်အဘယ်ကြောင့် USMNT မဟုတ်ဘဲ Holland ကိုကိုယ်စားပြုသင့်သည်
PSG - PSG: Blanc မှ OL သို့အိုလံပီယာအိုအားအိုလံပစ်အားအကြံပေးသည် - FOOT 01